Jamaica Blitz paMasika eGlobal: Kugadziridzwa Kwepamutemo neGurukota rezvekushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Jamaica Blitz paMasika eGlobal: Kugadziridzwa Kwepamutemo neGurukota rezvekushanya
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Kurwisa • Culinary • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • misangano • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
17 min kuverenga
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett, akapa rondedzero yezvekushanya kuParamende. Anotevera kutaura kwake.
Indasitiri yezvekushanya yeJamaica iri kuramba ichikwira munzira huru uye kudiwa kwechigadzirwa chedu chakafungwa patsva kuri pamusoro-soro.
Hapana kwainyanya kuoneka izvi kupfuura pamisika yedu yakabudirira kwazvo yemavhiki mashanu iyo yakatitora kubva kuUnited States neCanada kuenda kuMiddle East neUnited Kingdom.
Mhinduro yacho yakanga yakasiyana zvechokwadi.
Izvo zvatove pachena muhuwandu kuti nzira yedu nyowani yezvipo zvedu zvekushanya, yakazvarwa kubva muCOVID-19 denda kufunga, iri kubhadhara. Nhamba dzedu dzekusvika dziri kukwira, kukwira nendege kwemwaka wechando kuri kutaridzika zvakanaka, uye rwendo rwechikepe ruchadzoka mumachiteshi edu ese gore risati rapera.
Stopover vanosvika gore kusvika pari zvino vamira pamiriyoni 1.2, uye kubvira pakatangazve kutakura ngarava muna Nyamavhuvhu, tatambira vafambi vanopfuura zviuru makumi matatu nematanhatu, nepo mihoro yedu yava paUS$36,000 bhiriyoni.
Jamaika iri munzira yekupora. 2021 vanomira vanosvika vanofungidzirwa kunge vakakwira 41% gore-pamusoro-gore, uye gore kusvika parizvino tadzoreredza ingangoita hafu ye2019 yekumira bhizinesi.
Nhau dzakanaka ndedzekuti Zvita kazhinji mwedzi wakasimba kwatiri, uye unotanga mwaka wepamusoro apo mitengo yakakwira, saka isu tingangosangana nefungidziro yedu yevaenzi vanosvika miriyoni 1.6 uye inodarika mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica.
Pakupera kwa2022, nhamba dzevashanyi veJamaica dzinotarisirwa kusvika 3.2 miriyoni, nevatyairi vechikepe vanosvika miriyoni imwe uye vanosvika vanosvika miriyoni 1.1, ukuwo mihoro inofungidzirwa kuti inosvika mabhiriyoni matatu nemazana matatu emadhora.
Pakupera kwa2023, nhamba dzevashanyi veJamaica dzinotarisirwa kusvika 4.1 miriyoni, nevafambi vengarava vanosvika miriyoni imwe nehafu uye vanosvika vanosvika miriyoni mazana maviri nemazana mashanu uye vanotambira mabhiriyoni mana nemazana maviri emadhora.
Pakupera kwa2024, isu tinofungidzirwa kuti tichapfuura nhamba dzedu dzekutanga-denda nevashanyi vanosvika mamirioni mana nemazana mashanu uye mari inofungidzirwa kuti inosvika mabhiriyoni mana nemazana manomwe emadhora.
Dzimwe nhau dzakanaka dzeindasitiri dziri kufanotaura uku kudzoreredza kwakasimba kwekushanya:
90% yemapurojekiti ekudyara pre-denda anoramba aripo.
Anopfuura gumi nemaviri mapurojekiti ekuvandudza mahotera ari kuenderera.
5,000 mamwe makamuri.
Kubudirira kuri kuitika munzvimbo dzakasiyana dzechitsuwa.
Kudzoka kwekufamba kwechikepe pazviteshi zvese zvechitsuwa kutanga kwaZvita
Tichibata muchidimbu nezvekutakura ngarava, zvichitevera kumbomira kwemwedzi makumi maviri, Falmouth yakagamuchira ngarava yayo yekutanga nemusi weSvondo - Carnival Corporation's Emerald Princess, iine vamwe 20 vafambi nevashandi vechikepe.
Celebrity Equinox, Aida Diva naCrystal Serenity vari kutarisirwa kudzoka kuFalmouth mukupera kwemwedzi uno. Disney Cruise Lines 'mureza ngarava Disney Fantasy yakarongerwa kushanyira muna Zvita.
Kusvika kweEmerald Princess kwakapa mukana wekuvhurwa kwakapfava kweArtisan Village paHampden Wharf ine gumi mhizha. Yakagamuchirwa zvakanaka kwazvo nevashanyi vechikepe. Mari inosvika mazana manomwe emamiriyoni emadhora eTourism Enhancement Fund (TEF)-musha une dingindira rekutaura nyaya yeFalmouth uye inopa maJamaican nevashanyi mukana wekugovana chikafu chemuno, zvinwiwa, hunyanzvi, hunyanzvi, uye tsika.
Iyo inoumba chikamu cheyakakura Hampden Wharf Development chirongwa uye ichave yekutanga yekutevedzana yeArtisan Misha ichange iri munzvimbo dzekutandarira mhiri kwechitsuwa.
Mhedzisiro yakabudirira yemisika yedu yepasi rose blitz ichatibatsira kuzadzisa chinangwa ichi kana tikasachipfuura.
Ndinotenda izvi yakanaka rebound uye kuwedzera kudiwa kweBrand Jamaica Zvakanyanya kukonzerwa nekuedza kwedu kwakabudirira mukudzorera chivimbo chevafambi muDestination Jamaica.
Mitemo yedu yehutano nekuchengetedza, Resilient Corridors, Jamaica Cares, uye mwero wekudzivirira wepamusoro (vamwe 60%) pakati pevashandi vedu vekushanya vari kuvimbisa vashanyi vedu ruzivo rwakachengetedzeka, rwakachengetedzeka uye rusina musono pazororo.
Ndinoda kugovera zvimwe zvakabuda munzendo dzangu dzichangopfuura, pamwe nevamwe vakuru vakuru vezvekushanyirwa kwenyika, kumisika yedu mikuru pamwe nekupinda kwedu mumusika usiri wechinyakare wekuMiddle East, kwatakatsvaga kusimudzira vanosvika uye. kurudzira imwe mari muchikamu chekushanya.
IUnited States & Canada Markets Blitz
Takatanga blitz nenhevedzano yemisangano nevatungamiriri veindasitiri yekufambisa, midhiya nevamwe vane chekuita mumisika yedu miviri mikuru, United States neCanada. Ndinofara kugovera kuti kudyidzana kwedu nevatambi vakakosha vekushanya mumisika yese kwave nezvibereko zvikuru.
Paive nekunetseka kwakanangana neCCIDID-19 uye taida kuvimbisa zvishuwo zvekushanya kuti Jamaica inoramba iri nzvimbo yakachengeteka.
Maprotocol edu aripo kuti ave nechokwadi chekuti vashanyi vanogona kuuya kuchitsuwa, kuenda kunzvimbo dzedu dzinokwezva uye kuve neruzivo rwechokwadi rweJamaican zvakachengeteka uye zvisina musono. Pasinei nekunetseka uku, zvisinei, kuvimba muJamaica kunoramba kwakasimba.
Vakuru vekambani huru yendege pasi rose, American Airlines, vakativimbisa kuti panosvika Zvita panosvika Zvita pachange pave nendege dzinosvika gumi nenomwe pazuva, sezvo kudiwa kwekuenda kunokwira.
Vakataurawo kuti Jamaica yakawedzera Caribbean pakati pevatengi papuratifomu yavo yeAmerican Airlines Vacations uye vakasimbisa kuti vachange vachishandisa ndege dzavo itsva, hombe, dzakakura, dzeBoeing 787, munzira dzakati wandei dzinoenda kuJamaica kutanga Mbudzi.
Southwest Airlines, imwe yemakambani makuru endege muUnited States uye nendege hombe yepasirese inotakura mutengo wakaderera, yakavimbisa nhumwa dzedu kuti kufamba kwavo nendege muMontego Bay mumwedzi iri kuuya kwave pedyo zvakanyanya kusvika 2019 pre-denda rekodhi, zvichiratidza kuwedzera kudiwa. kwekuenda Jamaica nevafambi veUS.
Kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kunoshandisa ndege dzisingamire pakati penzvimbo huru dzendege dzepasi rose dzeUS dzeHouston (Hobby), Fort Lauderdale, Baltimore, Washington, Orlando, Chicago (Midway), St. Louis neMontego Bay.
Expedia Inc., sangano guru rekufambisa repamhepo pasi rose uye mugadziri mukuru webhizinesi rekushanya kuJamaica, vakati data ravo rinoratidza zvakajeka mukamuri husiku uye kukura kwevatyairi nemametric ese ari maviri anopfuura panguva imwe chete muna 2019. Vacherekedzawo kuti US inoramba iripo. iyo yakazara yepamusoro yekutsvaga yekutanga musika weJamaica.
Yedu yechipiri-yakakura musika sosi, Canada, ichaendesa makumi mashanu asingamire nendege pasvondo kuchitsuwa. Ndege idzi, dzakatanga Mbudzi 50, dzichashandiswa neAir Canada, WestJet, Sunwing, Swoop neTransat nemasevhisi akananga kubva kumaguta eCanada eToronto, Montreal, Calgary, Winnipeg, Hamilton, Halifax, Edmonton, St. John's, Ottawa, uye Moncton.
Mabhuku ekumberi ari kutenderera anosvika makumi matanhatu neshanu muzana emakumi matanhatu neshanu muzana uye kubhururuka nendege kweChando Season kuri pachikamu che65% che2019 mazinga ane zvigaro zvinosvika mazana maviri nemakumi matanhatu e82 zvakavharirwa mukati. kwemwedzi yakati wandei yakavhara kufamba kune dzimwe nyika.
Ipo Royal Caribbean International, yechipiri yakakura kwazvo rwendo rwekufamba pasirese, yakatangazve mashandiro kuJamaica muna Mbudzi wegore rino. Zvakare, vafambisi vezvikepe vakadzokorora chishuwo chakasimba chekushandisa zviuru zvevaJamaika pamabasa akasiyana siyana uye vakamirira zvigadziriso zvehurumende kuti zviitike.
Investment ichaita basa rakakosha mukudzoreredzwa kwekushanya nekupa mari inodiwa kuvaka nekusimudzira mapurojekiti akakosha mukusimudzira nekukura kwehunyanzvi hwekushanya.
Kushanya kwedu kuMiddle East kwakatibvumira kutsvaga mikana yeFDI muchikamu chedu chekushanya pamwe nekuvaka pamusoro penhaurirano dzakatanga muna Chikumi neGurukota reKushanya kweSaudi Arabia, Mukuru wake Ahmed Al Khateeb, ine chinangwa chekufambisa kushandira pamwe nekudyara mari mukushanya uye. dzimwe nzvimbo dzakakosha.
Kumira kwedu kwekutanga kwaive kuUnited Arab Emirates (UAE) paDubai World Expo 2020. Jamaica yaive pashoo ine pavilion yakanakisa ichiratidza kwaienda zvinhu zvitsva nezvitsva pasi pedingindira rinoti: “Jamaica Makes It Move.” Iyo pavilion ine nzvimbo nomwe, iyo inobvumira vashanyi kuona zvinoonekwa, kurira uye kuravira kweJamaica, uye kuona kuti nyika yedu inofambisa sei pasirese uye inoshanda seyakagadziriswa yekubatanidza.
Ndinodada kugovera kuti pavilion yedu inonakidza yakanzi imwe ye'inotonhorera' paWorld Expo 2020 nerutsigiro rweITP Media Group, Time Out Dubai.
Rwendo rweDubai rwakatipa mukana wekutevera nhaurirano nevatungamiriri veTUI, mumwe wevafambi vedu vakuru vevashanyi uye vatinoshanda navo muchikamu chekugovera cheindasitiri yekushanya.
TUI yakasimbisa kutangwazve kwendege dzavo uye rwendo rwekufamba kuenda kuJamaica, nemabasa ekufamba nechikepe akarongwa kutanga muna Ndira 2022. Kambani yacho yakanyatso tsanangura zvirongwa zvekuenda kumba muMontego Bay uye kuiswa kwekufona kuPort Royal panguva yavo yerwendo. Isu tinotarisira kuve nemafoni mashanu kubva muna Ndira kusvika Kubvumbi 2022 muPort Royal. Panguva yekukurukurirana neTUI, vakuru vekambani vakayambira kuti data ravo rinoratidza kuti kudiwa kwerwendo kwakakwira, uye vakakwanisa kuchengetedza zvakadzimwa. Vakagovanawo kuti huwandu hwemhepo hwemwaka uno wechando huchave zviuru makumi manomwe nenomwe, inongove 79,000% yakaderera pane pre-COVID yechando nhamba.
Tichiri kuDubai, takapedzisa misangano yakakosha yekudyara rwendo neDP World, imwe yemakambani makuru epasirese echiteshi chengarava uye marine Logistics, akavakirwa muUAE. Mumazuva matatu akateedzana emisangano, takava nehurukuro dzakakomba nezvekudyara muPort Royal Cruise Port uye mukana wekumisikidza kumba. Isu takakurukurawo kuvandudzwa kwehubhu yezvivakwa, Vernamfield multi-modal transport uye aerotropolis pamwe nekumwe kudyara kwezvivakwa.
DP World inyanzvi mukutakura zvinhu, masevhisi emugungwa, mashandiro echiteshi chechiteshi uye nzvimbo dzemahara dzekutengesa. Inobata mamwe mamirioni makumi manomwe emidziyo inounzwa neanosvika zviuru makumi manomwe zvikepe pagore, izvo zvakaenzana neinokwana gumi muzana yepasi rose traffic traffic inoverengerwa ne70 yavo yemugungwa uye mukati menyika zviteshi zviripo munyika dzinopfuura makumi mana.
Takatanga nhaurirano nevamiriri vepamusoro veEmirates Airlines, kuti titange basa rakakosha pakati peDubai neJamaica, mukupemberera Jamaica Day paExpo 2020, Dubai muna Kukadzi 2022. Emirates ndiyo huru ndege muUAE, uye Middle East yese, inoshanda. ndege dzinopfuura 3,600 pasvondo.
Pamusoro pezvo, isu tinotarisira dzimwe nhaurirano muchimiro chenzira dzekuenda kwakawanda dziri kuumbwa kuchamhembe kweCaribbean kugonesa kubatana kwakazara kweEmirates nevamwe vanodyidzana navo kuMiddle East.
Takasanganawo neUAE's Tourism Authority kuti tikurukure nezvekubatana kwekudyara kwekushanya kubva mudunhu, zvirongwa zvekushanya kuMiddle East, uye kupinda kwegedhi rekuNorth Africa neAsia uye kufambisa ndege.
Pamusoro pezvo, misangano yakaitwa nevakuru veEMAAR, ingangove iyo yakakura uye ine mukurumbira wekugamuchira vaeni uye Real Estate/Community developer muMiddle East; DNATA, iyo imwe hombe yekushanyira mufambisi muUAE uye TRACT, ane simba anoshanya anoshanda muIndia.
Rwendo rwedu rwekuUAE rwakapera nepamusoro-soro. Chirongwa chegore rino cheWorld Travel Awards chakaitirwa kuDubai, uye Jamaica yakaramba ichitonga ichikunda “Caribbean's Leading Destination' uye 'Caribbean's Leading Cruise Destination,' ukuwo Jamaica Tourist Board yakanzi 'Caribbean's Leading Tourist Board.'
Takakundawo muzvikamu zviviri zvitsva: 'Caribbean's Leading Adventure Tourism Destination' uye 'Caribbean's Leading Nature Destination.' Vatambi vakati wandei muindasitiri yekushanya kwemuno vakabudawo sevakahwina zvikuru.
Kubva kuUAE, takananga kuRiyadh, Saudi Arabia, uko takaita hurukuro nevakuru veSaudia Airlines. Ndiri kufara kugovera chirongwa ichi chiri muchitima chekusimudzira kubatana kwemhepo pakati peMiddle East neCaribbean.
Iyo yakafara zano ndeyekuita kuti Jamaica ive hubhu yekubatanidza kubva kuMiddle East kusvika kuCaribbean, Central America, South America nenzvimbo dzeNorth America. Izvi zvichaisa Jamaica sepakati pekubatana kwemhepo pakati peEast neWest.
Tine chivimbo chakanyanya kuti tichaona mhedzisiro kubva pane izvi munguva pfupi sezvo ndege dzese dzatakataura kuti dzakaratidza chido chakasimba cheCaribbean uye, kunyanya, Latin America.
Kutenderera kwezviitwa zvekushambadzira neakakosha ekushanya uye ekugadzirisa zvinhu muMiddle East zvakabereka zvibereko uye pasina mubvunzo zvichaguma nekuchengetedza mari nyowani nemisika nekuvhura masuwo makuru.
Kupinda kwedu mumusika wedu wechitatu mukurusa, United Kingdom (UK), kutsigira vanosvika kwakaratidza kuva nezvibereko zvakaenzana uye kwakagumisa misika yedu yepasi rose blitz.
Ndakatungamira chikwata chepamusoro-soro kubva kuMinistry of Tourism neJamaica Tourist Board (JTB) kuenda kuWorld Travel Market, imwe yeshoo huru dzekutengeserana nedzimwe nyika dzepasi rose, dzakaitirwa muLondon kubva muna Mbudzi 1 kusvika 3.
Takava nekudyidzana kwakanaka kwazvo nevatinoshanda navo vakakosha kuUK uye takavavimbisa nezvekugadzirira kweJamaica kwavari uye kuchengetedzeka kwedu sekwekuenda, paine isingasviki chikamu chimwe kubva muzana COVID-19 hutachiona paResilient Corridors.
Tichiri paWorld Travel Market, takasangana nevakuru vakuru veAmadeus, kambani yeEuropean-based global travel technology, vakatiudza kuti kuburitswa kwaSeptember 30 kweyazvino bhaisikopo raJames Bond, Hapana Nguva Yekufa, ine zviitiko zvakawanda zvakapfurwa mukati. Jamaica, iri kubatsira mukufambisa kufarira kwekuenda Jamaica, kunyanya kuUnited Kingdom.
Jamaica musha wemweya waBond, Ian Fleming achinyora zvinyorwa zveBond kumba kwake, "Goldeneye." Mafirimu eBond Dr. No and Live and Let Die akatorwawo pano. Pasina Nguva Yekufa, vagadziri vemafirimu vakavaka Bond's retirement beach house paSan San Beach muPort Antonio.
Zvimwe zviitiko zvakatorwa muJamaica zvinosanganisira kusangana kwake neshamwari yake Felix uye kusangana ne007 itsva, Nomi. Jamaica zvakare inopetwa kaviri kune ekunze Cuba zviratidziro.
Pamusoro pezvo, vakuru veAmadeus vakacherekedza kuti vari kuona kutsvaga kwakanyanya uye kubhuroka kufarira uye kudiwa kwekuenda kuJamaica kuUnited Kingdom uye vakati zvakakonzerwa nebasa reMinistry of Tourism nesangano rayo reruzhinji Jamaica Tourist Board (JTB) ine kiyi. vanodyidzana navo pamusika.
Mushure memwedzi uno tichatanga kugashira ndege dzinosvika gumi nenomwe pasvondo kubva kuUnited Kingdom, zvichidzosa chitsuwa ichi kusvika pachiyero chinosvika zana muzana chezvigaro zvendege sezvo nhamba dzedu dzekushanya dzichiwedzera.
TUI, British Airways neMhandara Atlantic indege nhatu dzinotakura vafambi pakati peUK neJamaica neTUI inoshanda nendege nhanhatu pasvondo, Virgin Atlantic kuwedzera kusvika kundege shanu pasvondo uye British Airways kushanda shanu pasvondo. Ndege idzi dzinobuda muLondon Heathrow, London Gatwick, Manchester neBirmingham. Kupfuura izvozvo, isu tinogona kuona imwe shanduko yehurongwa sezvo zvikwata zvedu zvinoenderera mberi nehurukuro nevatinoshanda navo.
Munhau kubva mumisika yedu yeEurope, yechitatu-yepamusoro-soro yeEuropean point-to-point carrier, Eurowings, yakaita ndege yayo yekutanga kubva kuFrankfurt, Germany, kuenda kuMontego Bay musi wa4 Mbudzi, iine 211 vafambi nevashandi.
Germany yanga iri musika wakasimba kwazvo kwatiri, nevashanyi zviuru makumi maviri nezvitatu vanobva munyika ino vachiuya kumahombekombe edu muna 23,000 denda risati rasvika. Kubhururuka uku kubva kuGermany kuchatibatsira muchinangwa chedu chekuwedzera vashanyi vanobva kuEurope, izvo zvanga zvichiitwa nechikwata changu.
Iyo sevhisi nyowani ichabhururuka kaviri vhiki nevhiki ichipinda muMontego Bay, kubva Chitatu neMugovera, uye inovandudza kupinda kwechitsuwa kubva kuEurope. Pamusoro pezvo, ndege yeSwiss leisure yekufamba nendege, Edelweiss, yakatanga nzendo nyowani kamwe-vhiki nevhiki kupinda muJamaica ukuwo Condor Airlines yakatangazve kufamba nendege kaviri pasvondo pakati peFrankfurt, Germany, neMontego Bay muna Chikunguru.
Hapana mubvunzo kuti kushanya ndiko kurova kwemoyo wehupfumi hweJamaican uye iyo catalyst ichaita kuti tikwanise kupora nekukurumidza. Aya mabhenefiti anobatika atiri kuita mukushanya achaita seadzokororwa kubatsira vese vanobatikana - vanhu veJamaican, vatinoshanda navo pakushanya uye vashanyi vedu.